Nhau - Iyo NEWYEA inobatsira Evergrande Xingluo kuchaja chikuva
Iyo NEWYEA inobatsira Evergrande Xingluo kuchaja chikuva
Iyo NEWYEA inobatsira Evergrande Xingluo kuchaja chikuva, kugovana ruzivo rwayo mukuvaka zviteshi muXiamen ne Changsha, uye kukurukura mazano matsva ebudiriro.
Zvino, apo kuchaja mabhizimusi emurwi ari kukwikwidzana kuti vashande pamwe nemakambani emota, Evergrande Group, seimwe yemabhizimusi epamusoro epasirese mazana mashanu, zvakare inoshingairira kuwedzera mumunda wemagetsi emagetsi matsva. Munguva pfupi yapfuura, yakachengetwa neEvergrande Yekuchaja Technology Co, Ltd., kuvandudzwa kwemabhizimusi ekuhwina-madiki aine dingindira rekuti "zviuru gumi zviteshi zvakavhura uye kuhwina-kuhwina mhedzisiro", muNanjing, Xi'an, Xiamen, Changsha, Baoding nezvimwe nzvimbo.
Vatungamiriri vazhinji vemadhipatimendi ehurumende vane chekuita neindasitiri yemotokari, vazhinji vanobhadharisa vanobhadharisa, pamwe nevamiriri vemabhizinesi madiki uye madiki vane chinangwa chekuvaka zviteshi mumaguta akakomberedza nzvimbo yekutambira vakaungana kuti vaite hurukuro dzakadzama uye kuchinjana nzira yekudyara mukuvaka uye kushanda kwenzvimbo dzekuchaja.
NEWYEA Technology, seyekutanga epamba isina waya uye wired akangwara kuchaja sisitimu yekuvandudza, kugadzirwa uye mashandiro emagetsi emagetsi, seyakaunganidzwa yekuchaja murwi wekugadzira opareta. Ini ndakakokwawo kuenda kumusangano wekutsinhana uri muXiamen ne Changsha.
Sezvineiwo, NEWYEA Tekinoroji yakange iri kuita zvakadzama mumunda wechaji yekuchaja kwemakore mazhinji. Iyo haina chete ine indasitiri-inotungamira yakangwara yekuchaja murwi zvigadzirwa, asi zvakare ine zvese-kutenderera, yakakura uye dzakasiyana bhizimusi mhinduro, izvo zvinogona kugadzirisa zvakanyanya anoenderana mushandirapamwe sevhisi modhi yevatengi. Zvino, iyo NEWYEA yakasimudzira kudyara, kuvaka uye mashandiro ekuchaja zvivakwa munyika yose nekubatana mukumisidzana mubatanidzwa pamwe nemakambani akasimba kutenderera nyika.
Kusvika ikozvino, NEWYEA yakagadzira makambani matanhatu ekubatana, anopfuura makumi maviri maguta eprojekti. Kugara uchivandudza zvinodiwa nevavanosimudzira kubva pamidziyo, chikuva, mashandiro, sevhisi, kuronga uye dhizaini, izvo zvinogona kupa zvirinani vimbiso yepamusoro yekuhwina-kuhwina kuvandudza kwekambani nevese vadyidzani.
Panzvimbo yemusangano wekutsinhana, vatungamiriri vari kutora chikamu uye nyanzvi vakanyatso tsanangura maindasitiri marongero uye mafambiro ebudiriro, chivakwa chechiteshi uye chiitiko chekushanda chakagovaniswa nevagadziri venzvimbo nevashandisi vepuratifomu, vakatendeseka, vanogadzira uye vanokurudzirana, uye vakatsanangura zvakajeka hukuru nzvimbo yekuvandudza yeindasitiri yekuchaja.
Iyo Xingluo yekuchaja chikuva yakatangwa neYevergrande inonyanya kubatsira mabhizimusi madiki uye madiki anoshanda pamwe nechiteshi kupa zvakakwana uye zvehunyanzvi manejimendi ekushandisa maturusi, uye nekupa yakasarudzika masevhisi mukusarudza kwemurwi, kuchaja nzvimbo, magetsi nemagetsi kutengesa kwekuvakwa kweiyo chiteshi. Kubudikidza ne "one-stop" kugadzirisa marwadzo ekugadzira iyo yakavhurika ecology, uye batanidza neese mapuratifomu mapuratifomu, kuitira kuti uvandudze hunyanzvi hwekuita mashandiro, asi zvakare kugadzirisa iyo "yekupedzisira kilometera" yemagetsi emagetsi matsva anofamba.
Kunyangwe iri yeiyo NEWYEA tekinoroji uye Evergrande Xingluo kuchaja Tong, musangano wekuchinjana uyu waita kunzwisisana kuri nani pakati pemativi maviri. Evergrande Xingoxtong inogona kupa yakavhurika chikuva chekuhwina-kuhwina mushandirapamwe weNewyeAs, kubatsira mabhizinesi kuita kuvaka nekushanda kwenzvimbo dzekuchaja nemutengo wakaderera uye nekuwedzera kushanda, uye zvakare nekuisa hwaro hwakasimba hwekubatana mune ramangwana pakati pemabhizinesi kumativi ese maviri.